musha » Blog » Zvibvunze Iwe Unofanirwa Here?
Munhu wose anokuudza kuti pane kugadziriswa nokukurumidza kana chishamiso chichakubvumira kuti uwedzere kupfava pasina kuedza kunoreva nhema.
Wakanzwa izvozvo here? Vari kureva nhema kwamuri.
Ichokwadi ndechokuti pane zvachose hapana kugadzirisa nokukurumidza kana chishamiso kana zvasvika pakurema kuora. Pane zvakawanda zvekushandisa izvo iwe unogona kuwedzera pane arsenal yako: Zvakanaka zvekudya. Dzidzira midziyo. Zvigadzirwa. Mvura. Zvinhu izvi zvose zvichakubatsira iwe, asi hapana chimwe chete chazvo chishamiso kana kurongedza nokukurumidza. Chokwadi ndechekuti pane chete mumwe kiyi yekurasikirwa nekurema nekuzvichengeta. Ndizvo chete mumwe chigoni chaunofanirwa kuva nacho kuti uwane utano. Haikwanisi kutengwa. Izvo hazviuye pomufananidzo wemapiritsi. Iwe haugoni kuzviwana pane zvisingabatsiri. Chokwadi ndechokuti, iwe watova nacho, ikozvino, iwe uchiverenga izvi.
Icho chiri pakati penzeve dzako.
Uropi hwako. Chinhu chimwe chete chinokuchengetedza kubva pakubudirira kwekurasikirwa kwemazivi uye mararamiro ehupenyu ndiyo pfungwa yako. Icho chinhu chinokuudza kuti iwe chaizvoizvo vanoda iyo yechipiri kubetsera mbatata yakashambadza. Icho chinhu chinokuudza kuti iwe wakaneta zvikuru kuti urege kuburuka pamubhedha uye kuita zvekuita. Ndicho chinhu chinokuudza kuti iwe uchatadza.
Asi, uropi hwako ndechimwe chinhu chichakuudza kuti UNOGONA kuzviita, kuti HACHIDZIDZE kudya iyo mukombe, iyo ichakutaurira kuti UNOGONA kukwira kuti makwendefa ekufamba. Uropi hwako huchakuudza zvakare kuti iwe wakafanirwa ... kana iwe uchidzidzisa huropi hwako kubvumira kutaura kwakanaka. Kurasikirwa kweuviri kunowanikwa chete kana iwe uchibvumira pfungwa yako kuziva kuti iwe wakafanirwa kufara uye utano. Uropi hwako ndiyo mhinduro yezvishamiso kumatambudziko ako kurasikirwa.
Saka, zvibvunze: Unofanirwa here?